ကားတစ်စီးတုန်ခါမှု ဖြစ်ရသောအကြောင်း အရင်းများ ...!
စံချိန်မှီကောင်းတဲ့ ကားလမ်းပေါ်မှာ ကား ကောင်းတစ်စီးကို မောင်းရတဲ့အရသာခံစားမှုက သာယာငြိမ့်ညောင့်တဲ့ တေးဂီတတစ်ပုဒ်ကို ခံ စားရသလိုပါပဲ။ AC ဖွင့်ထားတဲ့ကားထဲမှာ ဇိမ်ကျကျလိုက်ပါစီးနင်းရတာ၊ ဆူညံသံအနှောင့် အယှက်တွေမရှိ၊ ကားကိုယ်ထည်တုန်ခါမှုတွေ လည်းမရှိ။...
အခြေခံ သိထားသင့်တဲ့ ကား ပြဿနာ ဖြေရှင်းနည်း ...!
ကား တစ်စီးမှာ ပျက်နိုင်ချေ၊ ဖြစ်နိုင်ချေတွေက အများကြီးပါ။ သို့ပေမယ့် အချို့ ပျက်ဆီးမှု များက ဝပ်ရှော့ ပို့စရာ မလိုပဲ ကိုယ်တိုင် ပြင်လို့ ရတာ ရှိပါတယ်။ အချို့ကျတော့လည်း ကိုယ်တိုင်ပြင်လို့ မရပေမယ့် သိထားတော့ ဝပ်ရှော့ ပို့တဲ့အခါ ကိုယ်က အညာမခံရမှာ...
မိမိ၏ကားကို အသစ်အတိုင်း တောက်ပြောင်သွားစေမယ့် ထူးဆန်းတဲ့ ကားသန့်ရှင်း‌ရေး လုပ်နည်း ...!
လူ‌တော်‌တော်များများ မသိ‌သေးတဲ့ နည်း‌လမ်းဆန်းဆန်းပြား‌ပြားနဲ့ ကားတစ်စီးကို ဘယ်လိုသန့်ရှင်း‌ရေးလုပ်လို့ရမလဲဆိုတာကို ‌ဖော်ပြချင်ပါတယ်။ ‌‌ (၁)။ ကားမှန်များကို အစက်အပျောက် မကျန်ရှိဘဲ သန့်ရှင်းစေသော နည်းလမ်းကောင်း။ ဆပ်ပြာရည် (သို့မဟုတ်)...
သင်မသိသေးတဲ့ YBS ပေါ်က လိမ္မော်ရောင်ခုံတွေအကြောင်း...!
-YBS စီးကြတဲ့ ခရီးသည်တွေအနေနဲ့ အခုလက်ရှိ အသစ်ထပ်မံရောက်ရှိလာတဲ့ YBS City Bus ကားအသစ်တွေမှာ တပ်ဆင်ထားတဲ့ ထိုင်ခုံအပြာရောင်တွေထဲက ကားရဲ့ ဘယ်ဘက်အခြမ်းမှာရှိတဲ့ ထိုင်ခုံ လိမ္မော်ရောင်လေးကို ခရီးသည်တွေအနေနဲ့ တွေ့ မိကြမှာပါ။ -အဲ့ဒီထိုင်ခုံနေရာဟာ သက်ကြီးရွယ်အို...
ကားမှာပါတဲ့ ခလုတ်တွေက ဘာခလုတ်တွေလဲ သိထားသင့်ပါတယ် ..!
1.SMART KEY PUSH START ဒါကတော့ အားလုံးသိနေတဲ့အတိုင်း ကားဂရိတ် အမြင့်တွေမှာ ပါလာတတ်ပါတယ်။ တချို့ကားတွေမှာက SENSOR ပါသလို လက်က ကားတံခါးလက်ကိုင်နားမှာ ထားလိုက်တာနဲ့တံခါးပွင့်တတ်ပါတ်ယ။ တချို့ကတော့ လက်ကိုင်မှာပါတဲ့ အမည်းဘုလေးနိပ်မှ ပွင့်တာပါ။ ပိတ်တာကတော့ ဘု ဒါမှမဟုတ်...